Akukho manani asemthethweni kodwa kuqikelelwa ukuba iApple ithengise i-1 Apple Watch kule Q3.200.000 idlulileyo | Ndisuka mac
Kule meko, akukho nto ininzi esinokuyithetha ngokusesikweni kwaye i-Apple ayisoze yahlule intengiso ephunyezwe yi-Apple Watch kwiziphumo zayo zezemali, kwaye lo ngumba ozisa abasebenzisi abaninzi, abahlalutyi kunye namanye amajelo osasazo ezingqondweni zabo Ngubani ongacacanga ukuba iwotshi yeCupertino inenzuzo yokwenene kwi-brand. UTim Cook ngokwakhe uye weza ngaphambili esidlangalaleni echaza ukuba banelisekile ngamanani entengiso esixhobo, kodwa UNeil Cybart uya phambili kwaye ubeka iApple Watch ngaphezulu kweRolex uqobo ngokwengeniso yenkampani.
Iwotshi yeApple iyaqhubeka nokwenza umahluko phakathi kwezinto ezinxitywayo kwintengiso kwaye ubungqina boku kukuba uCook uthe ngoku bafikelele kwi-Fortune 500 kwaye Oku kuthetha ukuba ngaphezulu kwe-5 yezigidi zeedola zihlawulwa rhoqo ngonyaka. Ngayiphi na imeko, ukuqaqamba koku kukuba ngelixa amanye amajelo osasazo azama ukusenza sibone ukuba ukuthengisa akulunganga kakhulu kweli candelo, iApple iyaqhubeka nokufumana imali eninzi ngewotshi yayo.
Kwiminyaka emibini emva kokumiliselwa kwayo I-Apple ibinokuphumelela ukuthengisa iiyunithi ezingama-3.200.000 zokugqibela ze-Q1, into engezantsi kweQ4 ethetha phantse iiyunithi ezizizigidi ezi-5,5 kodwa igcine uhlobo ngaphandle kwayo yonke into.
Kukwalindeleke ukuba kulo nyaka ngokufika kwendlela entsha yokubukela I-Apple iyaqhubeka nokubetha amanani entengiso. Kuyimpumelelo ukuba namhlanje kwaye "nexesha elifutshane" apho iApple Watch ibisemarikeni, le yeyona wotshi ithengiswa kakhulu kwihlabathi, egqwesa nakwiifemu zemveli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Akukho manani asemthethweni kodwa kuqikelelwa ukuba iApple ithengise le Q1 3.200.000 yeApple Watch
I-Apple inokuthi ityhile ii-AirPod ezintsha ngoJuni WWDC